ကာမဂုဏ်အာရုံနှင့် သေမင်း ကြိုးကွင်းမှ ရုံးထွက်လာခဲ့သူ
မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်က ဝေသာလီမြို့ မှာ အမျိုးကောင်းသမီး တစ်ဦးရှိခဲ့ပါတယ်...။ သီဟ စစ်သူကြီးရဲ့တူမပါ..။ သီဟ စစ်သူကြီးက ဒီတူမလေးကို တုန်နေအောင် ချစ်လို့သူ့ နာမည်အတိုင်း...သီဟာလို့မှည့်ခေါ်ခဲ့ကြတာပါ..။ မြန်မာလိုတော့ ...မခြင်္သေ့ပေါ့..။
နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် ထက်မြက်တဲ့ မခြင်္သေ့ဟာ တစ်နေ့ဦးကြီးတော်ရဲ့ အိမ် ဆွမ်းကျွေး အလှုမှာ... မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာရပြီး သဒ္ဒါတရားတွေ ထက်သန်လာတဲ့အတွက် မိဘထံ ခွင့်ပန်ကာ ရဟန်းပြုလိုက်ပါတယ်...။
အနာထပိဏ်သေဌေးကြီး မျက်ရည်ယိုစီး ငိုကြွေးရခြင်း။
အနာထပိဏ်သေဌေးကြီးသည် သေခါနီး၌ ဘုရားရှင်၏ တရားတော်ကို နာလို၍တောင်း
ဆိုရာ အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ဤသို့ ဟောတော်မူ၏။ ....
*ဘုရားအဆူဆူရော၊ တပည့်သာဝကတွေရော၊ အားလုံးနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူကြပြီဆိုတာ
သတိပဌာန်တရားနဲ့ ရုပ်ဓမ္မ၊ နာမ်ဓမ္မတွေ ရှုပွားသွားကြရတာပဲ။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:30 AM No comments:
ရန်ကုန်မြို့မှ ဂဏန်းပေးသော ဆရာတော်ထံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်များ၏ လှူဒါန်းငွေ သိန်းပေါင်းလေးသောင်းကျော်ရှိ၏။ ထိုငွေများသည်
လောကအတွက် သာသနာအတွက် ဘာမျှ အကျိုးမရှိဘဲ အဟောသိကံ ဖြစ်နေရ၏။ ထိုအချိန်တွင် မိဘမဲ့ကလေးများ
စောင့်ရှောက်ရေးကျောင်းများတွင် လှူဒါန်းသူ နည်းပါး လှသဖြင့် ကလေးငယ်များမှာ မ၀ရေစာစား နေကြရ၏။
ဆရာတော်အား (ပိုင်းလော့ဆရာတော်)ဟုအမည်တွင်ခေါ်ဆိုရခြင်း မှာ ဖခမည်းတော်ဆရာဝန်က ဆေးတိုက်ကို (Pilot) ပိုင်းလော့အမည်၊ လမ်းပြသင်္ဘော တံဆိပ်နှင့်ဖွင့်ခဲ့ပါသည်။ ကလေးဘဝကပင် ပိုင်းလော့လေး ဟု ကျောင်းမှ ဆရာ၊ ဆရာမ များကခေါ်လေ့ရှိပါသည်။ ရဟန်းဘဝရောက်သော်လည်း ပိုင်းလော့ဘုန်းကြီးလေးမှ ပိုင်းလော့ ဆရာတော်ဟု အမည်တွင်နေခဲ့ပါသည်။ ရေလမ်း၊ ကုန်းလမ်း၊ လေလမ်း လမ်းမှန်သမျှ လမ်းမမှားရအောင် လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသောကြောင့် ဆရာတော်ကလည်း မတားမြစ်ဘဲ ထားခဲ့ကြောင်း အမိန့်ရှိခဲ့ဘူးပါသည်။
လောကမှာ လူတစ်သိန်းရှိတယ် ဆိုကြပါစို့ ။ ။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းပိုင်ရှင် ဓမ္မစေတီမင်းခေါင်၏ ကျောက်စာတော်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း။
ဘုရားရှင်ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်း ရဟန္တာ ၆ ပါးတို့၏ဗျာဒိတ်တော်အရအလံတစ်ရာစေတီ
ကြီး ဘီလင်းမြို့နယ်တွင် ပွင့်ပေါ်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကေလာသတောင်ထိပ်တွင် ထိုအကြောင်းကို
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:20 AM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:12 AM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:11 AM No comments:
အခါတပါး၌ မြို့တမြို့တွင် ကုဋေကြွယ် ကုံလုံကြွယ်ဝချမ်းသာသော သူဌေးကြီးတဦးရှိ၏။ တနေ့သောအခါ ထိုသူဋ္ဌေးကြီး နေသောမြို့သို့ ရသေ့တပါးကြွလာသည်။ ရတနာသုံးပါး ရိုသေဆည်းကပ်သူ သူဋ္ဌေးကြီးသည် ထိုသတင်းကိုကြားလျှင်ကြားချင်း ရသေ့ဆရာကြီးအား မိမိနေအိမ်သို့ ပင့်ဖိတ်ပြီး ဆွမ်းကပ်သည်။ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးပြီး၍
ရှေးအခါက ... ဗာရာဏသီပြည်မှာ ဘောဇနသုဒ္ဓိ မင်းနန်းစံနေတယ်။
အဲဒီမင်းဟာ စားတော်ထမင်းအုပ်ကို အဖိုးတစ်သိန်းထိုက်အောင် ပြင်ဆင်စေတယ်။ သူဟာ ရှေးဘုန်းရှေးကံကောင်းလို့ ဒီလိုအဖိုးတစ်သိန်းထိုက်တဲ့ ပွဲတော်အုပ်ကို သုံးဆောင်နေနိုင်တာဖြစ်ကြောင်း လူတွေ တွေ့မြင် အားကျလာစေချင်တယ်။ အဲဒီအခါမှ လူတွေ အားကျပြီး ဘုရင်လို ဘုန်းကံကောင်းလာအောင် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပြီး .....
အသာဓရဏဉာဏ်တော် ၆ ပါး။
၁။ မဟာကရုဏာ သမာပတ္တိဉာဏ် = မြင်မြင်သမျှ ဝေနေယျတို့ကို ရင်၌ဖြစ်သော သားကဲ့သို့
မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားသော လူတိုင်းအတွက် ဘ၀ခရီးလမ်း ရွေးချယ်ရာဝယ်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 7:30 AM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ ရှစ်ပါးသီလနဲ့ဟာ မစိမ်းကြပါဘူး …. အခါကြီး ရက်ကြီးတွေမှာ ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်ခြင်းဟာ မွန်မြတ်တဲ့ ကုသိုလ်တစ်ပါးပါပဲ ….။
ဒါ့ကြောင့် ဒီနှစ်သင်္ကြန်တွင်းကာလမှာ ကျွန်မလည်း တတ်နိုင်သလောက် ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်ခဲ့ပါတယ် …. မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့က နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့
ရှိခိုးဦးချတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သင်သိပါသလား ?။
မိမိတို့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ အလေးအနက် အမြတ်တနိုးထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို
ပြပါဆိုရင် ဦးခေါင်းပိုင်းကို ပြရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် အချင်းချင်း နောက်ပြောင်
ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ကို ထူထောင်ခဲ့သည့် အလောင်းဘုရား ငယ်ရွယ်စဉ် အချိန်ကာလ
ဖြစ်၏။ ရွှေဘိုနယ်သို့ ဘိုးတော်လိုလို၊ ၀ိဇ္ဇာလိုလို ရှမ်းဆရာကြီးတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး လူ
* နှစ်ကျိပ်ရှစ် (၂၈) ဆူ ဟူသည်မှာ အဘယ်နည်း ...
နှစ်ကျိပ်ရှစ် (၂၈) ဆူကုန်သော ဘုရားရှင်တို့အား အကျွန်ုပ်သည် ဦးခေါင်းရတနာဖြင့် ရှိခိုးပါ၏။ ဟု သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်တွင် ရွတ်ဆိုလေ့ရှိသည် …
* ၀ိဉာဉ်ကူးပြောင်းနေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား ...
ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ ဘယ်လိုနေကြရမလဲ ?။
* ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့်.. ဗေဒင်ပညာ
ပျံသန်းနေတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ ဦးတည်ချက်က ဘာလဲ?
ရှင်သန်နေတဲ့ တို့တွေရဲ့ ဦးတည်ချက်က ဘာလဲ?
* ဗုဒ္ဓနိမိတ်၊ ကြာတံဆိပ်တည့်
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:24 AM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:23 AM No comments:
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 8:15 AM No comments:
ဥစ္စာစောင့် @ ဥတ္တစောင့် လား? အဲဒီ စောင့်ချင်တာစောင့်သူအကြောင်း
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းပိုင်ရှင် ဓမ္မစေတီမင်းခေါင်၏ ကျေ...
ဥစ္စာစောင့် @ ဥတ္တစောင့် လား? အဲဒီ စောင့်ချင်တာစောင်...